အီသီယိုးပီးယားတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အလေ့အကျင့်များပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပြand္ဌာန်းချက်များ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Meta-analysis (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
Reprod ကနျြးမာရေး။ 2017 Sep 6;14(1):113. doi: 10.1186/s12978-017-0376-4.
အများကြီး AA ကို1, Kassa GM က2, Berhe AK3, Fekadu GA4.
အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်သီယိုးပီးယားအတွက်အဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆုံးအဖွတျအပေါ်အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများတိုင်းပြည်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်အီသီယိုးပီးအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏အမျိုးသားရေးခန့်မှန်းချက်ကိုပြသရာမျှလေ့လာမှုလည်းမရှိ။ ထို့ကြောင့်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်အီသီယိုးပီး၎င်း၏အန္တရာယ်အချက်များ၏အမျိုးသားရေးထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းရန်ကောက်ယူခဲ့သည်။
စနစ်တကျပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့် Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ပစ္စည်းများအစီရင်ခံအဆိုပါပိုမိုနှစ်သက်အီသီယိုးပီးထုတ်ဝေခြင်းနှင့်အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုတဲ့ဒေတာဘေ့စရှိသည် ဖြစ်. , PubMed, Google Scholar, CINAHL နှင့်အာဖရိကဂျာနယ်များအွန်လိုင်း။ ရှာရန်အသုံးအနှုန်းများ ဖြစ်. , အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်, အကာအကွယ်မဲ့လိင်, မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်စောစောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်နှင့် / သို့မဟုတ်အီသီယိုးပီး။ စာရင်းအင်းအကဲဖြတ်သုံးသပ်ချက်များစာရွက်စာတမ်း၏ဟန္န Briggs Institute မှ Meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဝေဖန်အကဲဖြတ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ Meta-analysis သည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Manager ကိုဆော့ဖျဝဲကိုအသုံးပြုပြီးကောက်ယူခဲ့သည်။ လေ့လာမှုဖော်ပြရန်သတင်းအချက်အလက်ဇာတ်ကြောင်း form မှာတင်ဆက်ခဲ့ပြီးအရေအတွက်ရလဒ်များကိုသစ်တောမြေကွက်အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Cochrane မေးစမ်းသပ်မှုနဲ့ကျွန်မ2စမ်းသပ်မှုစာရင်းဇယားလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလအတူထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခန့်မှန်းချက်ပျံ့နှံ့နှင့်ထူးဆန်းအချိုးတစ်ဦးကိုကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမော်ဒယ်အားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
31 သင်တန်းသားများနှင့်အတူ 43,695 လေ့လာမှုတစ်ဦးကစုစုပေါင်း Meta-analysis သည်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏ထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှပျံ့နှံ့ 42.80% (: 95%, 35.64% 49.96% CI) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ခြင်းအထီး (OR: 1.69; 95% CI: 1.21, 2.37), ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့မဟုတ်: 3.42; 95% CI: 1.41, 8.31), ရွယ်တူချင်းဖိအား (သို့မဟုတ်: 3.41; 95% CI: 1.69, 6.87) နှင့်ညစ်ညမ်း (OR: 3.6; 95% CI: 2.21, 5.86) စောင့်ကြည့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်တစ်ခုတိုးနဲ့ဆက်စပ်အချက်များဖြစ်ကြသည်။
အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏ပျံ့နှံ့သီယိုးပီးယားအတွက်မြင့်မားသည်။ အထီး, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု, ရွယ်တူချင်းဖိအားဖြစ်ခြင်း နှင့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှု အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, ဘဝကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးတစ်ဦးချင်းစီအကြားရွယ်တူချင်းဖိအားလျှော့ချရန်အကြံပြုသည်။ ကြားဝင်ဖို့ဒီဇိုင်းရပါမည် ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု။
အီသီယိုးပီး; ကျား, မ, meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; ရွယ်တူချင်းဖိအား; ညစ်ညမ်း; အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း, စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု